आश्चर्य हाउन्ड एक5रिल हो, देखि 25 payline स्लॉट NextGen गेमिंग जुन 25p स्पिनबाट सबै यन्त्रहरूमा खेल्न सकिन्छ। कुकुरको चिनियाँ वर्षको आधारमा, जेन्स, एस र विनचेस्टरको लागि हेर्नुहोस्, किनकि तिनीहरू अनियमित ढंगले बेस गेममा जंगलमा परिणत गर्न सक्छन्। यो खेल नि: शुल्क गेम सुविधाको बारेमा हो जहाँ तपाईं 15 निःशुल्क स्पिनहरू सम्म सुरु गर्न सक्नुहुनेछ - सम्म 15 चिपचिपा जंगलीहरू सुविधाबाट तपाइँलाई 6,000 पटक प्रत्येक मुक्त स्पिनमा तपाइँको दाबी सम्मको जीत सुरुवातमा थपिएको छ!
Wonder Hounds5रिल्स र 25 paylines सँग अर्को अग्लो गेन गेमिङ संचालित स्लॉट हो। 25p बाट £ 250 सम्म प्लेलिस्ट सबै यन्त्रहरूमा स्पिन, यो खेल कुकुरको वर्षमा आधारित छ जुन तपाईं जिनसे, एसि र विचेचेस्टरलाई जम्मा गर्नका लागि जुड्ने गर्दछ। चिनियाँ नयाँ वर्ष समारोह। यो हल्का-मनपराएको खेलमा नि: शुल्क स्पिन सुविधा छ जहाँ तपाइँले 15 चिपचिपा जंगलीहरूको साथ साथै 1 Wonderhound प्रति रिल मोड जंगलमा लाभ उठाउनुहुन्छ।
दर्शनमा, आश्चर्य हेन्डर राम्रो पार्कमा सेट गरिएको छ र कार्टुन शैली ग्राफिक्सहरू छन् - रेल्सहरूमा, तपाईं ए, कश्मीर, क्यू, जे र 10 प्ले कार्डहरू, कुत्ता हड्डीहरू र कुकुर कटोरेहरू देख्नुहुनेछ। तपाईंसँग3हाउन्डहरू - जेन्स, एसे र विनचेस्टर पनि छन्। Ace उच्चतम मूल्य कुञ्जी हो जहाँ तपाइँ 14 पटक5को लागि एक पेनलाइनमा तपाइँको दावी दिनुहुन्छ। त्यहाँ एक जंगली छ जुन सबै प्रतीकहरू बार स्क्याटर पट्टि दिन्छ र तपाईले 16 समयलाई5को संयोजनमा तपाईंको दाबी प्रदान गर्दछ।
जब यो बोनस सुविधाहरूमा आउँछ, वन्डर हाउन्डहरूसँग2छ - पहिलो अप Wonderhounds गोन जंगली सुविधा हो जुन बेस गेममा अनियमित रूपमा ट्रिगर गरिएको छ। स्पिन खेलमा स्पिन गरेपछि, 1 वा थप विन्डरहरू एक जंगली - 1 Wonderhound मा परिणत हुन सक्छ जंगली प्रति जंगली परिणाम राम्रो आशा मा परिणत गर्न सक्छ।
आश्चर्य हाउन्डहरू सबै नि: शुल्क खेल विशेषताहरूको बारेमा हो - यो जब तपाइँले3प्वा प्रिन्टहरू रिल्समा कहीं पनि स्क्याटर गर्नुहुन्छ भने प्ले हुन्छ। 3,4वा5स्क्याटरहरूले तपाईंको दाँया 4, 15 वा 100 पटक क्रमश: 8, 12 वा 15 खाली स्पिन दिन्छ। अब, 1 र 15 जंगली बीच सुविधाको सुरुवातमा रिल्समा अनियमित रूपमा थपिएका छन् - यी जंगली सुविधाको अवधिको लागि चिपचिपा रहन्छ!
यसबाहेक, सुविधाको बेला कुनै पनि जंगली प्रतीक पनि रहनेछ - यसले परिणामहरू धेरै चिपचिपा जंगलीहरूलाई रिलेमा पार्न सक्छ जुन ठूलो जीत हुन सक्छ। यसको घनत्वको बावजुद, आश्चर्य हाउन्ड एक उच्च भिन्नता खेल को माध्यम हो जुन 6,000 पल्ट तपाईंको दाबी हरेक नि: शुल्क स्पिनमा जित्न सक्छ!
म आश्चर्यचकित हाउन्ड जस्तै - यो सरल छ, चिकनी र चिसो ग्राफिक्स छ र एक हत्यारा बोनस सुविधा छ। भित्री भागको कुञ्जी भनेको धेरै चिपचिपा जंगली शुरुवात र सुविधाको समयमा धेरै अधिक ल्यान्डिङ पाउनु हो। तपाईं केवल धैर्य हुनुपर्छ - एक चोटि भए तापनि, तपाईं बढीको लागि झिक्दै हुनुहुनेछ! यदि तपाईंलाई कुकुर मनपर्छ भने, NetEntको हीरा कुत्तहरु सिफारिस गरिएको छ।
आश्चर्यचकित हाउन्डहरू अपडेट गरिएको: जनवरी 15, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 आश्चर्यचकित हाउन्डहरू
2.0.0.1 क्रिसमसको राज
2.0.0.2 आश्चर्यचकित हाउन्डहरू
2.0.0.4 भिडियो रूले
2.0.0.5 क्यारिबियन स्टड पोकर
2.0.0.6 चिसोका राजाहरू
2.0.0.8 भोल्टहरू र बोल्टहरू